Ungabasusa njani abalandeli kwi-Instagram: Iyintoni kwaye isebenza njani | Iindaba zeGajethi
I-Instagram yindawo yenethiwekhi yokuthandwa kakhulu namhlanje. Izigidi zabantu zineakhawunti kuyo. Ngokukodwa kwimeko yeempawu kunye nabashukumisayo kuye kwaba ngumboniso olungileyo, ukukhuthaza iimveliso okanye isiqu sakho. Ke ngoko, abaninzi bafuna indlela yokwenza fumana abalandeli kwinethiwekhi yoluntu, into enokwenzeka ngezikhokelo ezithile.
Kodwa kunokwenzeka ukuba umntu ongafuniyo ukulandela ngumlandeli wakho kwi-Instagram. Yintoni enokwenziwa kwimeko enjalo? Okwethutyana ngoku, usetyenziso oluthandwayo lunento evumela abasebenzisi ukuba basuse abalandeli. Unokwenza ukuba lo mntu angakulandeli.
1 Yintoni kwaye ususe abalandeli kwi-Instagram
2 Cima abalandeli be-Instagram
3 Kuthekani ngabalandeli esibasusayo?
4 Ngaba yinkqubo eguqulwayo?
Yintoni kwaye ususe abalandeli kwi-Instagram
Kukho amaxesha amaninzi xa umntu enokukulandela kwi-Instagram. Kodwa, kunokuba kunjalo unqwenela ukuba loo mntu akanakukulandela. Okanye ukuba uneakhawunti yabucala, wakhe wavuma ukuba ndikulandele, kodwa ngoku uyazisola. Kwimeko apho, inqaku lokususa abalandeli laziswa kunyaka ophelileyo.
Igama ngokwalo likwenza kucace ukuba yintoni. Ngumsebenzi osivumelayo susa abanye babalandeli bethu Kwi-Instagram. Ngale ndlela, aba bantu baya kuyeka ukubala njengabalandeli kwiakhawunti yethu. Kwimeko yeakhawunti yabucala, thintela aba bantu ekuboneni yonke into oyilayisha kwinethiwekhi yoluntu kwiakhawunti yakho. Ke kwiimeko ezinjalo kunokuba luncedo kakhulu.
I-Instagram ikuvumela ukuba ususe bonke abalandeli obafunayo, kwabo bakuluhlu lwethu. Akukho mida malunga noku. Ke ukuba kukho umntu omnye okanye abaninzi ofuna ukuyeka ukukulandela, ungayenza ngokulula. Ukongeza, inkqubo yokuphelisa abalandeli kwinethiwekhi yoluntu kulula ukuyenza. Ngale ngqiqo, kufuneka yenziwe kwinguqulelo yee-smartphones, apho oku kunokwenzeka khona.
Cima abalandeli be-Instagram
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ke kukuvula i-Instagram kwi-smartphone yethu. Xa sinenethiwekhi yokuncokola evulekileyo, kufuneka siye kwiprofayile yethu kwinethiwekhi yoluntu. Apho, kufuneka Cofa kwinani labalandeli esinabo kwiprofayili yethu. Ngale ndlela, isikrini sefowuni siza kubonisa uluhlu olupheleleyo nabantu okanye iiakhawunti ezisilandelayo.
Emva koko, kuya kufuneka sijonge loo mntu okanye abantu esingafuni ukusilandela, kuluhlu oluchaziweyo. Kwimeko apho unabalandeli abaninzi, ungasebenzisa ngokuthe ngqo injini yokukhangela kweli candelo kwinethiwekhi yoluntu. Xa silifumene igama lomntu, siyayibona loo nto kukho amachaphaza amathathu nkqo ecaleni kwegama lakho. Kuya kufuneka ke sicofe la manqaku mathathu. Siza kufumana imenyu encinci yesikrini, enokukhetha okwahlukileyo kule meko.
Olu khetho kukucima lo mlandeli we-Instagram. Le yile nto siyifunayo, ke kufuneka sichofoze kuyo. Xa sisenza oku, siya kucelwa isiqinisekiso, sikwenze kucace ukuba siqinisekile ngale nto siyenzayo. Kuhleli kuphela ukucofa ukucima, ukuze lo mntu ayeke ukuba ngumlandeli wethu. Ukuba ufuna ukwenza nabantu abaninzi, inkqubo yokwenza iyafana kuwo onke amatyala. Ngelishwa, yinto eyenziwayo ngexesha elinye. Ke ukuba unabalandeli abaninzi onokucima, inkqubo inokuthatha ixesha elide. Kodwa amanyathelo ekufuneka elandelwe ayafana, ke alula kakhulu.
Kuthekani ngabalandeli esibasusayo?
Kwimeko apho sinobume boluntu kwi-Instagram, inyani kukuba sisenzo esingavakali ncam. Kuba lo mntu uya kuqhubeka nokubona iimpapasho zakho kwinethiwekhi yoluntu. Ungaqhubeka nokunika ingxelo, ukuthanda kunye nokujonga iprofayili okanye amabali. Kwakhona, ukuba loo mntu unqwenela njalo, banokulandela kwakhona nangaliphi na ixesha. Ngale ndlela, kwiprofayile yoluntu, ukuba kukho umntu okucaphukisayo, kungcono ukuyivimba. Kuba ukuvimba loo mntu kuthetha ukuba ngekhe bakwazi ukubona naluphi na ushicilelo lwakho, okanye banxibelelane nawe
Kulabo basebenzisi babucala babucala kwi-Instagram, ke yinto enomdla kakhulu. Kuba ukuba kukho umntu ongafuni kukulandela, uyifumana ngale ndlela. Ngokuyisusa kubalandeli bakho, lo mntu akazokwazi ukubona naluphi na ushicilelo lwakho, okanye amabali kwiprofayile yakho kwinethiwekhi yoluntu. Yile nto kanye ibifunwa, ke ngaloo ndlela isebenza kakuhle.
Nangona lo mntu enokusithumela umyalezo wabucala, kwimeko apho sisebenzise olu khetho. Kanjalo Unokucela ukusilandela kwakhona kwinethiwekhi yoluntu. Ke oku akuthethi kuthi masilahle lo mntu. Nangona sithatha isigqibo sokuba ngubani osilandelayo kwaye ngubani ongasebenzisi i-Instagram. Kodwa, ukuba iyasikhathaza ngokwenene, kufuneka sibhenele kukhetho lwebhloko. Ukuba awufuni nje ukuba abone iiposti zakho, ungamsusa kubalandeli bakho.
Ngaba yinkqubo eguqulwayo?
Ukuba ucime umlandeli kwiakhawunti yakho ye-Instagram, loo mntu uyacinywa njengomlandeli, akukho thuba lokuguqula inkqubo. Le yinto enganikezeli ngamathuba amaninzi. Nangona kunjalo, ngulo mntu kufuneka athathe inyathelo kule meko, ukuba ufuna bakulandele kwiakhawunti yakho kwakhona.
Ke ngoko, ukuba ucima umlandeli ngempazamo, Umntu uthe kuya kufuneka alandele i-akhawunti yakho kwakhona. Ukuze inkqubo ngandlela thile "ibuyiselwe umva." Kodwa yinto ekufuneka eyenzile umsebenzisi ekuthethwa ngayo. Kwimeko yeakhawunti yabucala, loo mntu kuya kufuneka athumele isicelo kwakhona ukuze akwazi ukulandela iprofayile yakho kwi-Instagram. Isicelo ekuya kufuneka usamkele, ukuze ndikwazi ukubona iimpapasho zakho kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I intanethi » Indlela yokususa abalandeli kwi-Instagram